Waterjet mabụ ụlọ ọrụ - China Waterjet marble Manufacturers, Suppliers
okirikiri mosaic ụkpụrụ waterjet granite kapeeti imewe medallions tile maka ihe ịchọ mma n'èzí.Ihe nrite granite n'ala bụ nkume kachasị mma, nwere ihe na-egosipụta ma dị mfe ọcha.Zụta nnukwu marble ga-amasị ndị ahịa gị.
Ime n'ala medallion ụkpụrụ waterjet marble nkume imewe na nnukwu ọnụ ụlọ
Teknụzụ igbutu Waterjet bụ nke a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ usoro maka ịkpụzi ma ọ bụ ịkpụ akpụ maka taịlị ala Marble & Granite n'oge a.
A na-ejikarị atụmatụ Waterjet eme ihe na ala mabụl ma ọ bụ granite, ọkachasị n'ụlọ ma ọ bụ ebe a na-azụ ahịa, nnukwu ụlọ ịgba bọọlụ, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-ebuli elu, ma ọ bụ ụzọ mbata ọ bụla iji gosipụta ọnụnọ okomoko, ịma mma na udo.
Dị ka nkume okike na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche nke agba, ndị nwe na ndị na-emepụta ihe nwere ike igosi ugbu a onye ha n'otu n'otu site na ịmepụta ụdị mmiri jet pụrụ iche ma ọ bụ nka nke dabara na mmasị ha.
Waterjet marble multi floral peacock marquetry inlay imewe maka ihe ndozi mgbidi
Inlay Marble bụ nka ọdịnala a na-eme n'ezinaụlọ ndị mmadụ rụrụ ọrụ na ọmarịcha ụlọ dị ka Taj Mahal.Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nwere nkà n'usoro a dị nro, nke gụnyere ịcha, ịkpụ, na iji aka kanye ụdị mabul.Ọ bụ usoro dị ogologo.Nke mbụ, anyị ga-eji mbadamba nkume marble malite.Anyị na-eme atụmatụ na ya.Mgbe ahụ, anyị na-eji nkume dị ka lapis lazuli, malachite, cornelian, tourquoise, jasper, nne pearl, na pawa shei, bụ́ ndị e ji emepụta ihe na-ese marble.Anyị nwere wiil Emery nke na-enyere aka n'ichepụta atụmatụ sitere na nkume.Anyị na-esepụta atụmatụ ndị ahụ na mpekere nkume, wee tinye ha na wiil Emery ma na-akpụzi ha n'otu n'otu.Ogologo oge ọ na-ewe iji mepụta ihe na-ekpebi nha na ọdịdị ya.Ọ na-ewe ogologo oge iji mee ntakịrị ntakịrị.Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-eji ngwá ọrụ nwere ntụ aka damọnd kpụọ oghere ndị dị na mabụl ahụ.A na-atụnyezi iberibe ihe ndị ahụ kpụrụ n'ime oghere ndị dị na Marble.N'ikpeazụ, anyị na-ehichapụ ma mejupụta mpempe ahụ, ọ dịkwa njikere ịgbakwunye na nchịkọta anyị maka ndị na-azụ ahịa anyị.
Granite odo odo, Gray Granite, Black Granite, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Gray Gray dị ọkụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha,